ဝါးခယ်မ : ဦးအံ.ကျော် ဆိုသည်မှာ ( သို. ) ၀ါးခယ်မ၏ လမ်းပြကြယ် အတ္ထုပ္ပတ္တိ
၁၉၄၃ ဇူလိုင် ၃ ရက် ( တနင်္ဂနွေ ) နေ. တွင် ဦးကျင်စိန် - ဒေါ်ကျင်မြိုင် တို. မှ ၀ါးခယ်မမြို. စာရေးကုန်းရပ်ကွက် မြူရုံးလမ်းတွင် မွေးဖွားခဲ့သည် ။ ၁၉၅၆ ခု ဟယ်ရီတန် နှစ်တွင် မိခင်ဖြစ်သူ ကွယ်လွန်သဖြင်. ကျန်ရစ်သည်. ညီအကို ၅ ဦးကိုအဒေါ်ဖြစ်သည်. အထက ၁ ၀ါးခယ်မ ( ကျောင်းကြီး ) ၏ ကျောင်းအုပ်ဆရာမကြီး ဒေါ်ပိုက်မိ က ခေါ်ယူစောင်.ရှောက်၍ ကြီးပြင်းစေခဲ့ပါသည် ။ ၁၉၆၀ တွင် ၀ါးခယ်မ အထက ၁ မှ တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းအောင်မြင်ခဲ့ပြီး ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်၌ ပညာဆက်လက်သင်ကြားရာ ၁၉၆၂ တွင် ဥပစာသိပ္ပံ ( I.Sc ) အောင်မြင်ခဲ့ပါသည် ။၁၉၆၄ ဇန်န၀ါရီတွင် မှော်ဘီ၌ ပထမဆုံးဖွင်.လှစ်သော ဗိုလ်လောင်းသင်တန်း အမှတ်စဉ် ၂၉ သို.တက်ရောက်ခဲ့သည် ။ BC နံပါတ် မှာ ၉၇၀၃ ဖြစ်သည် ။
၁၇ အောက်တိုဘာ ၁၉၆၄ တွင် ဒုတိယဗိုလ် ( တပ်စုမှုး ) အဖြစ် ခမရ ၁၀၃ - မြင်းခြံ တွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပါသည် ။ ၁၀ ဇူလိုင် ၁၉၇၁ တွင် ဗိုလ်ကြီး ( တပ်ခွဲမှုး ) အဖြစ် ခလရ ၂၄ သို.ပြောင်းရွှေ.တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သည် ။ထို.နောက် စစ်ဦးစီးမှုး - တတိယတန်း ( G3) အဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပြီး ၁၁ ဇူလိုင် ၁၉၇၈ တွင် ဗိုလ်မှုးအဆင်.သို. ရာထူးတိုးခဲ့ပါသည် ။၂၃ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၉၇၉ တွင် ခမရ ၇၇ ဋ္ဌာနချုပ်တွင် စစ်ဦးစီးမှုး ဒုတိယတန်း ( G2) အဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သည် ။ ၂၇ ဒီဇင်ဘာ ၁၉၈၀ တွင်ဒုတိယ တပ်ရင်းမှုးအဖြစ် ခမရ ၂တွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပြီး ၁၆ ဇူလိုင် ၁၉၈၃ တွင် ဒုတိယ ဗိုလ်မှုးကြီး ရာထူးဖြင်. တပ်ရင်းမှုး တာဝန်ယူလျှက် တပ်တည်ဆောက်ရေးအပိုင်းတွင် နာမည်ရအောင် စွမ်းဆောင်နိုင်ခဲ့ပါသည် ။ တပ်မတော်တွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခိုက် ဓနုဖြူ ၊ ကျုံပျော် ၊ ကျောင်းကုန်းဒေသ စစ်ဆင်ရေးများ ၊ ကချင်ပြည်နယ် စစ်ဆင်ရေး ၊ ပဲခူးရိုးမစစ်ဆင်ရေး ၊ ရှမ်းပြည်နယ်စစ်ဆင်ရေး ၊ကရင်ပြည်နယ်စစ်ဆင်ရေး များတွင် ရဲစွမ်းသတ္တိအပြည်. ပါဝင်ဆင်နွဲခဲ့ပါသည် ။ ကရင်ပြည်နယ် လှိုင်းဘွဲ.ဒေသစစ်ဆင်ရေးတွင်၂လအတွင်း တိုက်ပွဲ ၄ပွဲခန်.အောင်မြင်အောင် တိုက်နိုင်ခဲ့ပြီး မဲသဝေါဒေသရှိ KNU စစ်ဋ္ဌာနချုပ်ကို ဦးဆောင်တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့သဖြင်. မဲသဝေါတောင်ကုန်းကို အံ့ကျော်ကုန်း ဟု နိုင်ငံတော်မှ ဂုဏ်ပြု သတ်မှတ်ပေးခဲ့ပါသည် ။ ၁၉၈၄ တွင် မော်ဖိုးကေ တောင်ကုန်းအား တပ်မတော်တပ်ရင်းများအနေဖြင်. မည်သို.မျှတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်၍ မရသဖြင်. ဒုတိယဗိုလ်မှုးကြီး အံ့ကျော် အားဦးဆောင်စေလျှက် နောင်ရိုးစစ်ဆင်ရေးအနေဖြင်. တိုက်ခိုက်စေခဲ့သည် ။ ထိုတိုက်ပွဲအတွက် ရဲဝံ.စွန်.စားစွာ တိုက်ခိုက်ရင်း ၀မ်းဗိုက်တွင် လက်နက်ကြီးဒါဏ်ရာ ပြင်းထန်စွာ ရရှိခဲ့ပြီး အထက်အမိန်.အရ ပြန်လည်ဆုတ်ခွာခဲ့ရပါသည် ။ ထိုသို.ဆုတ်ခွာရာတွင် အထမ်းဖြင်.သာ သယ်ထုတ်ရပြီး ၆ ရက်ခန်.ကြာသဖြင်. တပ်မတော် စစ်ဆေးရုံသို.ရောက်ရှိချိန်တွင် ခန္ဓာကိုယ်တွင်း အစိတ်အပိုင်းအချို. ပုပ်ကုန်သည်အထိဖြစ်ခဲ့ပြီး ရင်ဘတ် နှင်. ၀မ်းဗိုက်ကြား ကြွက်သားစိုင်များ ( Diaphragm ) စုတ်ပြတ်သွားခဲ့ကာ ၆လခန်.ဆေးရုံတက်ရောက်ကုသခဲ့ရပါသည် ။ ၂၀ သြဂုတ်လ ၁၉၈၄ တွင် နိုင်ငံတော်မှ လန်ဒန်မြို.သို.သွားရောက်ဆေးကုသစေခဲ့ပါသည် ။ ညာဘက်မျက်လုံးတစ်လုံးမှာလည်း အဆုံးရှုံး ခံခဲ့ရပါသည် ။ ထူးခြားသည်မှာချုပ်ရိုးပြေပြီးအူများပွင့်ထွက်တတ်သဖြင့် အတွင်းကလီစာများကို အင်္ဂလန်နိုင်ငံမှအထူးစီမံထားသည့်အိတ်ဖြင့်ထည့်၍ချုပ်ထားရခြင်းပင်ဖြစ်သည်။ နောက်ဆက်တွဲ
ဝေဒနာများကြောင်. ၂၇ အောက်တိုဘာ ၁၉၈၅ တွင်ထပ်မံသွားရောက်ကုသခဲ့ရပြန်ပါသည် ။ ထို၁၉၈၅ တွင်နောက်ဆက်တွဲရောဂါများအတွက် စတီးရွိုက်များ အများအပြားပေးခဲ့ရသောကြောင်. ဆီးချိုရောဂါ ကိုစတင်ခံစားခဲ့ရသလို အူကျွံခြင်းကိုပါ ခံစားခဲ့ရပါသည် ။ ၂၇ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၉၈၆ တွင်တပ်မတော် မှ အငြိမ်းစား ယူခဲ့ရပါသည် ။
နိုင်ငံတော်အတွက် တပ်မတော်သားဘ၀ဖြင်. စွမ်းစွမ်းတမံ တာဝန်ထမ်းခဲ့ပြီးနောက် ၁ မတ်လ ၁၉၈၆ တွင် ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဋ္ဌာန အိမ်ယာကော်မတီတွင် နိုင်ငံရေး တာဝန်အရ အတွင်းရေးမှုး ( ယခင်ခောတ် - ပါလီမန်အတွင်းဝန် ) အဖြစ် ပြောင်းရွှေ.တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပါသည် ။ နိုင်ငံရေး ရာထူးများ ပယ်ဖျက်လိုက်သည်.အခါ မြို.ရွာ နှင်. အိုးအိမ်ဖွံ.ဖြိုးမှု ဦးစီးဋ္ဌာနတွင် ဒုညွှန်ချုပ်တာဝန် ဖြင်. နိုင်ငံ့အကျိုး သယ်ပိုးခဲ့ပါသည် ။ ထိုစဉ်က မြို့ရွာနှင့်အိုးအိမ်ဌာနဆိုသည်မှာ ယခင်ကဆောက်လုပ်ထားသော တိုက်များအားထိန်းသိမ်းခြင်း အိမ်လခကောက်ခံခြင်း လုပ်ငန်းလောက်သာရှိပါသည် ။ဋ္ဌာနသို.ရောက်ရှိလာပြီးနောက် ညွှန်ချုပ်အားမတည် လည်ပတ်ငွေအဖြစ် သိန်း၃၀၀၀ခန်. နိုင်ငံတော်သို့တောင်းခံပြီး လုပ်ငန်းများတိုးချဲ့လိုကြောင်း တင်ပြရာ ညွှန်ချုပ်မှ ဤပိုက်ဆံများဆုံးရှုံးသွားလျှင် နှစ်ဦးစလုံးထောင်ကျသွားနိုင်ကြောင်းပြောကြားခဲ့သော်လည်း မိမိအရည်အချင်း မိမိယုံကြည်စွာဖြင်.
၄င်းမတည် လည်ပတ်ငွေသိန်း ၃၀၀၀ကိုအရင်တည်လျှက် မြို့သစ်များ ၊ လှိုင်သာယာ၊ ရွှေပြည်သာ၊ ပုလဲ၊ တောင်ဒဂုံ ၊ မြောက်ဒဂုံ၊ အရှေ့ဒဂုံ၊ သန်လျှင် အောင်ချမ်းသာ၊ သီလဝါ ၊ စက်မှုဇုံကြီးများတည်ထောင်ပေးနိုင်ခဲ.သည် ။ ညွှန်ချုပ်ဖြစ်သူ ဗိုလ်မှုးကြီးအောင်ဖုန်း အငြိမ်းစားယူချိန်တွင် ညွှန်ချုပ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပါသည် ။
၁၉၈၈ခုနှစ် အရေးအခင်းကာလအပြီး လှိုင်သာယာ ၊ ရွှေပြည်သာ ၊ ဒဂုံ ၊ ဝေဘာဂီ မြို.သစ်များ နှင်. စက်မှုဇုံများ တည်ဆောက်ရာတွင် အဓိက တာဝန်ယူခဲ့ရပါသည် ။ ထိုစက်မှုဇံများ ၀န်းကျင်တွင် စက်ရုံအလုပ်သမားများ၏ သားသမီးများအတွက် ရည်ရွယ်၍ မူကြိုကျောင်းများပါ တစ်ပါတည်း ဆက်စပ်ဆောက်လုပ်ပေးခဲ့ပါသည် ။ဘုရင်.နောင်လမ်းမကြီးအား အစအဆုံး ( ဆင်မလိုက် မှ ရွှေပြည်သာအထိ ) ကို တာဝန်ယူဖောက်လုပ်ပေးခဲ့သလို တက္ကသိုလ် ရိပ်သာလမ်းသစ်( ကုက္ကိုင်း မီးပွိုင်. မှ ဂွတ္တလစ် အထိ ) အားလည်းဖောက်လုပ်ပေးခဲ့ပါသည် ။ လုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်သည့်အလျှောက် စီမံထူးချွန်(ပထမအဆင့်)ကိုရရှိခဲ့ပြီး၊ရန်ကုန်မြို့ကိုအလွတ်ရသူ(YangoonDictionary)ဟု
ဦးအံ.ကျော် မကွယ်လွန်မှီ အိုးအိမ်ဝန်ထမ်းများအားနှုတ်ဆက်ပွဲ
၁၉၉၅ ခုနှစ်တွင် အဆုတ်ရောဂါကို ခံစားခဲ့ရပြန်သည် ။ ၁၉၉၆ တွင် အူသိမ်ပေါက်သဖြင်. ဖြတ်ထုတ်ခဲ့ရပြီး February တွင်တစ်ကြိမ် ၊ May တွင်တစ်ကြိမ် ထပ်မံခွဲစိတ်ခဲ့ရသည် ။ အူမှာလည်း ခွဲစိတ်စဉ်ကပင် အကြိမ်ကြိမ် ဖြတ်ထုတ်ခဲ့ရပြီးဖြစ်သည် ။ ၂၀၀၁ ခုနှစ်တွင် လေဖြတ်ခြင်းကို ခံစားခဲ့ရပြီး လက်တစ်ဖက် ၊ ခြေတစ်ဖက် ကောင်းစွာမသန်မာတော.သော်လည်း နိုင်ငံ.တာဝန်များကို ဆက်လက်ထမ်းဆောင်ခဲ့သည် ။ လေဖြတ်ပြီးနောက် အသည်းတွင် သံကောင်ဝင်၍ အနာဖြစ်သဖြင်. အသည်း ၃ပုံ ၂ပုံအား ဖြတ်ထုတ်ခဲ့ရပြန်သည် ။ ၂၀၀၃ ခုနှစ်တွင် ကျန်မျက်လုံးတစ်ဖက် ရေတိမ်စွဲသဖြင်. ခွဲစိပ်ရပြန်ပါသည် ။ ၃ ဇူလိုင် ၂၀၀၄ တွင် အသက် ၆၀ ပြည်.ခဲ့သော်လည်း နိုင်ငံတော်မှ လိုအပ်ချက်အရ တစ်နှစ်ထပ်မံ တာဝန်ထမ်းဆောင်စေခဲ့သဖြင်. ၃ ဇူလိုင် ၂၀၀၅ တွင်မှ အငြိမ်းစားယူခဲ့ရပါသည် ။ ၂၀၀၉ ခုနှစ်တွင် ကျောက်ကပ်လဲခဲ့ရပြီး ယခင်က တောက်လျှောက် အူခဏခဏပိတ် ၀မ်းချုပ်သဖြင်.ဆေးရုံခဏခဏတက်ရပြီး ကျောက်ကပ်လဲပြီးချိန် ၂၀၁၀ မှစ၍ သီးခြားရောဂါ မရှာတွေ.ပဲ ၀မ်းလျှောခြင်းကို အချိန်တိုင်းနီးပါး အနည်းနှင်.အများခံစားနေခဲ့ရသည် ။ အစားထိုးလဲလှယ်ထားသော စိတ်အပိုင်းများကြောင်. ခန္ဓာကိုယ်၏ ခုခံအားစနစ်ကို နှိမ်.ချထားရသဖြင်. အခြားသောပြင်ပရောဂါများက အလွယ်တကူဝင်ရောက်နေနိုင်သဖြင်. အထူးသတိထားနေခဲ့ရပါသည် ။
ကျန်းမာရေး မကောင်းသည်.ကြားမှ ၀ါးခယ်မမြို.နယ် ဖြိုးရေးအတွက် ဤသို.
၀ါးခယ်မ မြစ်ကူးကြိုးတံတား တည်ဆောက်ပြီးချိန်မှ စ၍ ၀ါးခယ်မမြို.နယ် ဖွံ.ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းများ အား ကိုယ်စွမ်း ဥဏ်စွမ်းရှိသမျှ အားလုံးပုံ၍ အရှိန်အဟုန်ဖြင်. ဆောင်ရွက်ခဲ့ရာ
(၁၁)အထက-၁ ရွှေခယ်ရတနာစာကြည့်တိုက်ဆောက်လုပ်ရာတွင်မ တည်ငွေသိန်းတစ်ရာလှူဒါန်းခြင်း၊
အားကစားရုံတို့တွင်လည်း မ တည်ငွေများလှူဒါန်းခဲ့ပါသည်။
မျက်စိကု ခရီးစဉ် တစ်ခုတွင်တွေ.ရသော ဦးအံ့ကျော်
၂၀၀၉ ခုနှစ်တွင် ၀ါးခယ်မမြို.နယ်အသင်း ( ရန်ကုန် ) ၏ ဥက္ကဋ္ဌ အဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့ပြီး ၂၀၁၃ ဒီဇင်ဘာတွင် အနားယူခဲ့ပြီးနောက် နာယကအဖြစ် ပြောင်းလဲတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပါသည် ။
သူ့လက်ထက်တွင် အသင်းကြီး၏"ပညာ၊ကျန်းမာ၊ သာယာ"ဆောင်ပုဒ်မှာ ပိုမိုပီပြင်အဓိပ္ပာယ်ရှိလာပြီး၊ပညာရေးရန်ပုံငွေ၅၅၅သိန်းကိုတဦးတည်း မ တည်လှူဒါန်း၍ ပညာသင်ဆုများနှုန်းထားပိုမိုမြင့်လာပြီးဆရာဝန်၊အင်ဂျင်နီယာနှင့်အဆင့်မြင့်ပညာဘွဲ့ရပညာတတ်
အမြောက်အမြားကိုမွေးထုတ်နိုင်ခဲ့သည်။သခင်သိန်းဖေ မှ ပညာရေးရန်ပုံငွေ သိန်း ၅၀၀ ထပ်မံထည်.၀င်လှုဒါန်းခဲ့ရာ ထိုပညာသင်ဆုကို သူ.အမည်မသုံးစေဘဲ ၀ါးခယ်မသခင်သိန်းဖေပညာသင်ဆု ဟုသာ ခေါ်ဝေါ်သုံးစွဲရန် သတ်မှတ်ပေးခဲ့ပါသည် ။
ဆေးကုသမှုအစီအစဉ်အတွင်းအချိန်ယူ၍မြို့နှင့်ကျေးရွာဆက်လမ်းများ၊ကျေးရွာချင်းဆက် ကားကူးကွန်ကရိတံတားများကိုလည်း မ တည်လှူဒါန်းတည်ဆောက်ပေးခဲ့သည်။
မွေးမြူရေးလုပ်ငန်း၊ ဒေသထွက်စားသုံးကုန်လုပ်ငန်းရှင်များအားလည်း အတိုးမဲ့ချေးငွေထုတ်ချေးခြင်း၊ မျိုးကောင်းမျိုးသန့်စပါးထုတ်လုပ်ရေးအတွက် လယ်ဧက ၃၀ကိုဝယ်ပြီးမျိုးသန့်ခြံနှင့်၅ဧကကွက်စံပြစိုက်ခင်းကိုလည်း ထူထောင်ပေးခဲ့သည်။
မကွယ်လွန်မှီ နာရီ ၄၀ ခန်.က မြို.နယ်အသင်း အမှုဆောင်များအား လက်ခံတွေ.ဆုံစဉ်
၂၀၁၅ ခုနှစ် ၁လပိုင်းခန်.မှစ၍ ကျန်းမာရေး နှင်. ပတ်သက်၍ သံသယရှိ ဖွယ်အခြေအနေအားစစ်ဆေးကြည်.ရာ ကင်ဆာရောဂါအားခံစားနေရပြီဖြစ်ကြောင်း သမားတော်ထံမှအတည်ပြုချက်ရရှိခဲ့ပြီး အားနည်းနေသောကြောင်. ကိမို ပေး၍မရပဲ ဓါတ်ကင်နေခဲ့ရပါသည် ။ ထိုအချိန်ထိ ၀ါးခယ်မသို. ၂ရက် ခရီး ၊ ၃ ရက် ခရီး ၊ တစ်ခါတစ်ရံ နေ.ချင်းပြန်ခရီးများသွားရောက်ပြီး မြို.ရွာ ဖွံ.ဖြိုးရေးအတွက် နောက်ဆုံးအင်အားကုန်သုံးကာ ကြိုးစားပမ်းစားဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည် ။ ထို.အပြင် မိမိနှင်.ဆက်စပ် ပတ်သက်ခဲ့သော ၀န်းကျင်များမှမိတ်ဆွေများ ဖြင်.လည်း နောက်ဆုံးအကြိမ် စုံညီတွေ.ဆုံပွဲများ ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး ( နှုတ်မှ တရားဝင်ဖွင်.ဟမပြောခဲ့သော ) နှုတ်ဆက်ပွဲများ ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည် ။
၂၀၁၆ ဧပြီလ ၂၃ ရက် ညတွင် ၀မ်းတောက်လျှောက်သွားသဖြင်. SSC အထူးကုဆေးရုံ သို. ပို.ဆောင်ခဲ့ရပြီး ဧပြီ ၂၄ ရက်နေ.လည်တွင် ၀ါးခယ်မမြို.နယ်အသင်း အမှုဆောင်များအား လက်ခံတွေ.ဆုံစကားပြောခဲ့ပါသည် ။ ထို.နောက် ခုခံအားနည်းနေပြီဖြစ်သော ကြောင်. နမိုးနီးယားပါဝင်ရောက်လာခဲ့ပြီး ၂၀၁၆ ဧပြီလ ၂၆ ရက်မနက် ၆နာရီ ၂၅မိနစ်တွင် ကွယ်လွန်အနိစ္စရောက်ရှိသွားခဲ့ရပါသည် ။ ကျန်ရစ်သော ခန္ဓာကိုယ်အား အချည်းနှီးမဖြစ်စေရန် မကွယ်လွန်မှီကပင် ဆေးတက္ကသိုလ် ( ၁ ) ရန်ကုန်သို. လှုဒါန်းထားခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါသည် ။
ကွယ်လွန်ချိန်အထိ ၀ါးခယ်မမြို.နယ်အသင်း ( ရန်ကုန် ) ၏ ဂုဏ်ထူးဆောင် နာယက အဖြစ်လည်းကောင်း ၊ မြန်မာနိုင်ငံဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းရှင်များအသင်း နာယကအဖြစ်လည်းကောင်း ၊ ရွေသံလွင် ဘိုးဘွားရိပ်သာစီမံခန်.ခွဲမှု ကော်မတီ ဂုဏ်ထူးဆောင်နာယက အဖြစ်လည်းကောင်း ၊ အမျိုးသားဖွံ.ဖြိုးတိုးတက်ရေး ကုမ္ပဏီအုပ်စု၏ အကြံပေး အဖြစ်လည်းကောင်း ( သိရှိသ၍ ဖော်ပြခြင်းသာဖြစ်သည် ) တာဝန်ယူလျှက်ရှိပါသည် ။
သူ.အနေဖြင်. ၀ါးခယ်မမြို.နယ် အတွင်း ပညာ / ကျန်းမာ / သာယာ ရေးအတွက် အဖွဲ.အစည်းများစွာကို ကမကထပြု လှုဒါန်းတည်ထောင်ပေးခဲ့ပြီး ထိုသို.တည်ထောင်ရာတွင် ရေရှည်ရပ်တည်နိုင်ရေးအတွက် ရန်ပုံငွေတစ်ရပ်စီပါ ပူးတွဲတည်ထောင်ထားပေးပြီး ထိုရန်ပုံငွေများကို အရင်းမပျောက် အတိုးအညွန်.သာ အသုံးပြုလျှက် လည်ပတ်နိုင်စေရန် စိစဉ်ထားခဲ့ပါသည် ။မြို.လေးတွင် သူမတည် ၊ လှုဒါန်း ၊ တည်ထောင်ခဲ့သော လုပ်ငန်းများ အများအပြားရှိသော်လည်း သူ.အမည်တပ်မှည်.ခေါ်ခြင်းမျိုးအား လုံးဝမနှစ်သက်ပဲ ကြက်တောင် နှင်.ကိုယ်ကာယအားကစားရုံတစ်ခုကိုသာလျှင် အသင်းအမှုဆောင်များ ၊ မြို.နယ် အကျိုးဆောင်များ နှင်. တာဝန်ရှိသူများမှ အတင်းခွင်.ပြု ချက်တောင်းသဖြင်.သာ သူ၏နောက်ဆုံးသက်တမ်းကာလများအတွင်း ခွင်.ပြုပေးခဲ့ခြင်းဖြစ်သည် ။
မိုးမခလမ်း နေအိမ် ရက်လည်ဆွမ်းသွတ်
ကောင်း(၃)ကောင်းနှင့်ပြည်စုံသူ ဖြစ်သည်ကြောင်.ကွယ်လွန်သည်မှ ရက်လည်သည်အထိ သတင်းစာများတွင် သူ၏ ဆွေးမျိုးသားချင်း ၊အပေါင်းအသင်းများအပါအ၀င် သူ၏ ကျေးဇူးရှိခဲ့ဖူးသော Company ၊ အဖွဲ.အစည်းများ ၊ သူတည် တည်ထောင်ခဲ့သော ၊ ကူညီခဲ့သော ၊ လှုဒါန်းခဲ့သော အဖွဲ.အစည်း ၉၀ ခန်.၏ ၀မ်းနည်းမှတ်တမ်းပေါင်း ၄၅ ခုခန်.ဖော်ပြခဲ့ကြပါသည် ။
REF ; ၂၀၁၄ ဖေဖော်ဝါရီ လတွင် ၀ါးခယ်မမြို.နယ်အသင်းမှပြုစုသော ကိုယ်ရေးအကျဉ်း ၊ အနီးကပ်ကျန်းမာရေးတာဝန်ခံ၏ ပြောကြားချက်များ ၊ ၀ါးခယ်မအသင်း အတွင်းရေးမှုး ပြုစုသော အချက်အလက်အချို.၊ ညီဖြစ်သူ၏ ဖြည်.စွက်ချက်အချို. နှင်. Online & Printed Media အချို.၏ record
Posted by မင်းသီဟ (Min Thiha) at 4:46 PM
MWRN ၏ TOT 2016
ဆရာမကြီး ခင်နှင်းယု အထိမ်းအမှတ် ကျောက်စာတိုင် ဖွင်...
ဆရာမကြီး ဒေါ်ခင်နှင်းယု ၏ စာအုပ် Linkများ အားစုစည်း...
မွှေး ၀တ္ထု ၏ မိခင် စာရေးဆရာမကြီး ခင်နှင်းယု
ဗိုလ်မှုးကြီးအံ.ကျော် အတွက် ၀မ်းနည်းမှတ်တမ်းများ (...
ဦးအံ.ကျော် ဆိုသည်မှာ ( သို. ) ၀ါးခယ်မ၏ လမ်းပြကြယ်...